မြစ်ဆုံစီမံကိန်းစာချုပ်ကို နိုင်ငံသားများအား တစ်လအတွင်း ပွင့်လင်းမြင်သာစွာပြသရန်တောင်းဆို - YOYARLAY Digital Media and News
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းစာချုပ်ပါအချက်အလက်တွေကို ပြည်သူတွေသိရှိနိုင်အောင် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာပြသဖို့အတွက် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းရေး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးဖျက်သိမ်းရေး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်ထဲမှာ
“၁။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) အခန်း (၁) နိုင်ငံတော်၏ အခြေခံမူများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုဒ်မ ၄ တွင် – နိုငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာသည် နိုင်ငံသားများထံမှဆင်းသက်ပြီး နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌တည်သည်ဟုလည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၃၇ (က) တွင် – နိုင်ငံတော်သည် နိုင်ငံတော်ရှိ မြေအားလုံး မြေပေါ် မြေအောက်၊ ရေပေါ်ရေအောက်နှင့် လေထုအတွင်းရှိ သယံဇာတပစ္စည်းအားလုံး၏ ပင်ရင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်ဟုလည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၄၅ တွင် – နိုင်ငံတော်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမည်ဟုလည်းကောင်း ဖော်ပြထားသည်။
၂။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအခန်း (၈) နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပုဒ်မ ၃၉၀ တွင် နိုင်ငံသားတိုင်းသည် အောက်ဖော်ပြပါ ကိစ္စရပ်များတွင် နိုင်ငံတော်အား ကူညီရန်တာဝန်ရှိသည်။
(က) အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း။
(ခ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း
(ဂ) အများပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဟူ၍ တိကျစွာပြဌာန်းဖော်ပြထားပါသည်။
၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အထက်ဖော်ပြပါ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ဧရာဝတီမြစ်ပေါ်ရှိ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းရေးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံတော်အား ကူညီနိုင်ရန် “မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းရေး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်” ကို (၂ . ၅ . ၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၄။ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းသည် နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် အချုပ်အခြာအာဏထိခိုက်ဆုံးရံှုးမည့်အရေးထိ အကျိုးသက်ရောက်ပါသည်။
၅။ ဤစာချုပ်အား နိုင်ငံသားအားလုံးသိရှိပိုင်ခွင့်သည် နိုင်ငံသားများ၏ မွေးရာပါအခွင့်အရေး ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာချုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအား ပွင့်လင်းမြင်သာစွာအသိပေးရန်တာဝန်သည် နိုင်ငံတော်အာဏာကိုရယူထားသူတို့၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။
၆။ ဤစာချုပ်ပါအချက်အလက်များအား နိုင်ငံသားများကိုပြသမှုမရှိခြင်းကြောင့် နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသူများအကြားတွင်လည်းကောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံနှင့်လည်းကောင်း၊ တည်ဆဲအစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်လည်းကောင်း၊ မယုံကြည်မှုများ၊ ရန်လိုမှုများ၊ စိတ်ဝမ်းကွဲမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေလျက်ရှိပါသည်။ စာချုပ်ပါအချက်အလက်များများအားပြသခြင်းဖြင့် ပြည်သူတို့၏ ဒီမိုကရေစီရပိုင်ခွင့်များကို မြှင့်တင်ပေးရာလည်း ရောက်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် ဧရာဝတီမြစ်ကြီးမပျက်စီးစေရန်၊ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမည်မှာ အသက်တမျှအရေးကြီးသဖြင့် ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့်အညီ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအား အချိန်မီဖျက်သိမ်းရန် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။
၇။ ထို့ကြောင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘက်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတော်ဘက်မှတာဝန်ရှိသူများ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်ချုပ်ဆိုထားသည့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းစာချုပ်အား ယနေ့ (၂၈ . ၅ . ၂၀၁၉) မှ (၂၈ . ၆ . ၂၀၁၉) ထိ တစ်လအတွင်း နိုင်ငံသားတို့အား ပွင့်လင်းမြင်သာစွာပြသရန်နှင့် တရားဝင်မိတ္တူကူးယူခွင့်ပြုရန် ကျွနု်ပ်တို့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းရေး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်မှ တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။” လို့ ဖော်ပြပါရှိထားပါတယ်။
Camera & Edit-Cherry
Previous Previous post: အမျိုးသမီးဝန်ကြီး တဝက်ပါဝင်လာတဲ့ တောင်အာဖရိကအစိုးရအဖွဲ့
Next Next post: ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းက သင့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လို အထောက်အကူပေးလဲ
အားကစားလောကရဲ့ ထူးထူးခြားခြား အကြောင်းအရာတွေကို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် တင်ဆက်ပေးဖို့အတွက် ရိုးရာလေးရဲ့ Sports Video ကဏ္ဍကို စတင်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာ။ Post Views: 1,320
ဒီတစ်ပတ် Do you Know ကဏ္ဍမှာတော့ လူဝင်စား တကယ်ရှိလား ဆိုတာကို တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကဏ္ဍလေးကို အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေလို့ စောင့်မျှော်အားပေးပါလို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ Team (ရိုးရာလေး) Post Views: 735
Published: April 2, 202010:34 am Updated: April 20, 202010:36 am